Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2768 - 2769 | XperimentalHamid
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2768 - 2769
Funda Isahluko 2768 - 2769 yenoveli Indodana kaMillionaire eMthethweni by INkosi Leaf mahhala online.
AmaRom abelokhu efuna uRuoli isikhathi eside. Yize ebenqikaza ukuyeka, kodwa futhi ngokungacaci wazizwa ukuthi ithuba lokubuyisa indodakazi yakhe lincane kakhulu.
Noma, wayelamukele iqiniso enhliziyweni yakhe lokuthi indodakazi yakhe yabulawa, kepha amandla ayisisekelo okuqhutshwa uthando lukamama ekujuleni kwenhliziyo yakhe amnxusa ukuthi aqhubeke nokumfuna, ngoba lokhu kungukudla kwakhe kuphela.
Ngalesi sikhathi, amaRom azizwa ukuthi inqobo nje uma indodakazi yakhe isaphila, noma engakhokha malini, angayemukela. Noma indodakazi yakhe ilimele futhi ikhubazekile, uyokwaneliseka uma nje indodakazi isaphila.
Kodwa-ke, akazange alinge ukuphupha ngakho. Indodakazi yakhe ayigcinanga ngokuma phambi kwakhe, kodwa yenze intuthuko enkulu ekulimeni kwayo.
Lesi yisibusiso nje esifihlekile, futhi kuyisibusiso esibhakabhakeni ngenxa yalolo daba lokubulala!
Iqiniso lokuthi uRen Mai uyimpumelelo enkulu ukuphakama okungenakubalwa abaphathi bezobuciko bokulwa abangakufinyeleli kukho konke ukuphila kwabo!
Ngaphandle kwanoma yini enye, ukushaya kwenhliziyo kukaRen kukhulu, okungenani isisekelo sokulima sikaRuoli, ngejubane lokuqala lokutshala, seye phambili iminyaka engamashumi amahlanu kuya kwayisithupha.
Noma engamvumela ukuthi azijwayeze eminye iminyaka engamashumi amahlanu noma ayisithupha, angahle angakwazi ukuhlakulela iRen Channel ngokugcwele.
Ngakho-ke, indodakazi inenhlanhla, angaba kanjani, njengomama, angajabuli.
KwakunguMninimzi Omncane Wade Womndeni owasindisa impilo yendodakazi yakhe futhi wayivumela ukuthi ithuthukise ukulima kwayo ngokunganqeni. Ngakho-ke, ekujuleni kwenhliziyo yamaRom, wayezimisele ngisho nokusebenzisa impilo yakhe ukukhokhela umusa omkhulu kaCharlie.
Ebona amaRom eguqile phambi kwakhe, uCharlie ubesezophumela phambili ezosiza, uRuoli naye washesha walandela unina waguqa phansi.
Umama waguqa kuGrace ngaye, wayengasukuma kanjani.
Waguqa eduze kukanina waklinya wathi: “Master Wade, uma ngingaphinde ngimbone umama, konke kungenxa yomusa wakho. Kusukela manje kuqhubeke, uRuoli uzimisele ukukulandela eceleni kwakho futhi akusize ngenhliziyo nangomphefumulo! ”
Kusho uRuoli. Lapho ekhuluma, inhliziyo yakhe empeleni inobugovu.
Wayazi ukuthi uCharlie wayengelona uhlobo lomuntu owayembophile ngomusa, ngakho wayekhathazeke kakhulu ukuthi ngemuva kokuthi uCharlie emvumele ahlangane nonina, wayezocela ngqo umama wakhe ukuthi amhambise.
Yize uRuoli ayemkhumbula unina, efuna ukumbona, futhi amazise ukuthi usaphila, wayengafuni ukubuyela ayohlala nomama wakhe.
Lokhu kungenxa yokuthi ufuna ukwazi ukuhlala noCharlie ngokuzayo.
Ngakolunye uhlangothi, kungenxa yokubuyisela ukubonga, futhi ngakolunye uhlangothi, kungenxa yokuthi usevele wamthanda.
Ngaphezu kwalokho, wazi kahle kamhlophe ukuthi isimo sakhe njengendodakazi engekho emthethweni asifanele isimo sikaCharlie. Njengonina ongumRoma noyise uZynn emuva ngaleso sikhathi, yize babenemizwa, ekugcineni bahlukaniswa baba ngamakhosi nezinceku. Ngakho-ke wayenethemba lokuthi angahlala ngakuCharlie njengoba unina ayeseceleni kukayise.
Kungakho atshele uCharlie ukuthi uzimisele ukuhlala eceleni kwakhe amlandele.
Lapho amaRom ezwa lokhu, wakuqonda ukukhetha kwendodakazi yakhe enhliziyweni yakhe.
Ngalesi sikhathi, ubedonsa kanzima ekujuleni kwenhliziyo yakhe.
Wayengazi ukuthi indodakazi yakhe icabangani.
Ukuthi ukhumbule imizwa emibi phakathi kwakhe noZynn, wabe esecabanga ngobunzima bokukhulisa uRuoli eyedwa. Wayesaba ukuthi uRuoli uzolandela ezinyathelweni zakhe ngokuzayo.
Uma kungenzeka, akasoze afisa ukuthi indodakazi yakhe igcine ifane nayo.
Ngenkathi kukhona ukuduma okujulile enhliziyweni yakhe, uCharlie wavele wathi: “Ruoli, ngikusindisile ekuqaleni, futhi bengingafuni ungizuzise ngempilo yakho, ngakho-ke akudingeki ungilandele isikhathi ngokuzayo. Ungakushintsha ngokuphelele ikhanda lakho uqale impilo yakho entsha ngokuzazi uhlanzekile. ”
Ngokushesha uRuoli wanikina ikhanda wathi, “Mphathi, uma ngishiya isimo esikhona njengamanje, uma bazi ukuthi ngiyini, uma ngingenakho ukuba ngikhosele kuwe, ngiyesaba ukuthi kungekudala noma nini, ngizowela ezandleni yamaJapane. Ngiyesaba ukuthi akekho emhlabeni ongangivikela… ”
Ekhuluma ngalokhu, uRuoli wahleba ngokudabukisayo wathi: “Ngakho… uma ngithemba ukuhlala noMaster, ngakolunye uhlangothi, kukhona engingakwenzela khona, ngakolunye uhlangothi, ngithemba nokuqhubeka ngivikelwe nguwe master…”
AmaRom Ngaleso sikhathi, ngokuzumayo waqaphela ukuthi indodakazi yakhe naye uqobo bahlukile impela.
Ngaleso sikhathi, njengonogada kaZynn, wayekhonza uZynn ngenhliziyo yonke. Kungaze kushaywe indiva ukuthi wanikela ngayo yonke intsha yakhe kuye, nengalo eyodwa nayo yanikezelwa kuyena.
Ngemuva kwalokho wamzalela uRuoli, okulingana nokuzinikela kuye ngendlela efihliwe engxenyeni yesibili yokuphila kwakhe.
Kodwa umehluko wendodakazi ukuthi lo Mfundisi Omncane ungumsindisi wakhe. Uma indodakazi yakhe ihlala naye ngokuzayo, ngeke kube ukuzinikezela kwendodakazi yakhe ngokungaboni.
Ngale ndlela, impilo yakhe ngeke ngokwemvelo idabuke njengeyakhe.
Ngakho-ke washesha wathi, “Master Wade, uma uRuoli enze inhlekelele eJapan, abasoze bamvumela ahambe kalula. Ukwazile ukumhlenga kubo, futhi kumele ukwazi ukumvikela kahle. Ubelokhu esebenza kanzima kusukela eseyingane, futhi angalokothi asho ukuthi unekhono elivelele, angathathwa njengebanga eliphakeme kakhulu phakathi kontanga yakhe. Ngemuva kokumsiza ukuthi angene emgqeni kaRen, amandla akhe nakanjani angathathwa njengehamba phambili phakathi kontanga bakhe ezweni. Naye uma eseceleni kwakho, nakanjani uzokwazi ukukusiza ukuxazulula izinkinga eziningi, ngakho-ke ngicela umgcine eseceleni kwakho! ”
UCharlie ucace bha enhliziyweni yakhe, inqobo nje uma isidumbu sikaRuoli singatholakali usuku olulodwa, amaJapane Awasoze aphela amandla.
Lapho nje sekuveziwe ukuthi ungubani uRuoli, nakanjani uzobhekana nesihlava sokufa.
Ngakho-ke, ukuhlala eceleni kwakhe kufanele kube yindlela engcono kakhulu kuye.
Ngaphezu kwalokho, uCharlie naye waba nomuzwa wokuthi wayengenabo abasizi abakwaziyo ukusebenza kahle.
Noma ngabe i-Orvel, i-Issac, noma abanye abamele umndeni wakwa-Aurous Hill, kufaka phakathi iWarnia, bangabantu abavamile abanamakhono amancane okulima. Yize amandla ka-Aoxue amuhle manje, useyintombazanyana encane esikoleni. Uqinisekile, ngeke amvumele azenzele ukulwa nokuzibulala.
Ngakho-ke, ukugcina uRuoli nokumenza isifuba nakho kuyindaba ebaluleke kakhulu kuye. URuoli akanamandla kuphela kepha futhi angalawula inqwaba yamakhosi lapho esemndenini wakwaSu. Ukwehla nokwehla eJapan kufakazela ukuthi usenekhono eliqinile lobuholi. Uma ebuzwa ukuthi eze ngaphambili amhlakulele amandla amakhulu ngokuzayo, kuzoba wusizo olukhulu.
Ecabanga ngalokhu, uCharlie uthe, “Ruoli, njengoba uzimisele ukuhlala eceleni kwami, uzoba ngumuntu wami kusukela namhlanje. Kusukela manje kuqhubeke, uzolandela imiyalo yami, futhi uzokwenza konke okusemandleni akho ukungivikela futhi ungigcine ngiphephile, uma uthatha isinqumo sokuhamba ngolunye usuku, ungangitshela ngobuqotho nangokungagunci ukuthi awufuni ukuhlala lapha ngaleso sikhathi isikhathi, kepha kufanele wazi ukuthi ngaphambi kokuba uhambe ngokusemthethweni, akukho ongakwenza ngakho, ungadli lutho, uqonde? ”
URuoli wakhamisa ngaphandle kokungabaza: “Ngicela ungakhathazeki, Master, inqobo nje uma ungangithandi, noma ngabe ngishiya le mpilo, ngizokulandela ngemuva kokufa kwami ​​futhi ngingaze ngiyeke!”
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2766 - 2767
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2770 - 2771